သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ခဏလေး....
အေးချမ်းလိုက်တာ.. တိတ်ဆိတ်လိုက်တာ… အပ်ကျသံကြားမတတ်ပဲ….
တ၀ုန်းဒိုင်းဒိုင်းတိုက်ခတ်နေတဲ့ လေပြင်းတွေ ရုတ်တရက်ငြိမ်သက်သွားသလို….
အတ္တပုံဆောင်ခဲတွေကို ကျားရဲတွေ စားသွားလို့၊ အရိုးတွေပါ ကျိုးကြေကွာကျ..
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပန်းရနံ့ရယ်… သဘာဝလေပြေညှင်းရယ်….
ပင့်သက်ခိုးရှုလို့ ဒီလိုဆိတ်ငြိမ်သက်သာယာတဲ့ နေရာလေးမှာ
Privacy ကို Violate မလုပ်တတ်တဲ့
အဖြူရောင်သက်သက် စာဖတ်သူအချို့ကိုတော့ အားနာပါရဲ့
လောလောဆယ်တော့ တယောက်ထဲ ဝေမျှနေပါရစေဦးနော်…
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ အခြေအနေတွေ၊ အသက်အရွယ်တွေ၊
နေရပ်ဒေသတွေ ပညာအရည်အချင်းတွေနဲ့ ဘောင်ခတ်မကြည့်ပဲ
ကလောင်အမည်နဲ့ စာတွေကိုပဲ မြင်နိုင်မယ့်တစ်နေ့
ခဏလေး ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်နေလိုက်ဦးမယ်ကွယ်…
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:19 PM
ဖတ်ရင်းနဲ့ ကြက်သီးတောင်ထတယ် အစ်မရေ့ ကြောက်လာပြီး သိပ်နုတဲ့ မလေးက ဒီလိုမျိုးရေးတာ သိပ်ကိုရှားတာပဲ ။
ဟုတ်တယ် အဲ့နေရာလေးကစိတ်ထွက်ပေါက်လေးတစ်ခု ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ အတွက်ရှင်သန်ရာ၊ သိပ်လှတဲ့အနုပညာတွေပဲ ရှိနေတာပဲ ..........အခုတော့ အဲ့နေရာမှာ မနာလိုဝန်တိုမှုတွေတွေ့ နေရတာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ... ခဏလေးပဲငြိမ်ဗျို့သိပ်ကြာသွားရင် ဒီနေရာလေး အဖော်မဲ့နေမယ်။
မောင်မျိုးပြောသွားတာ ဟုတ်တယ်။ တပြည်သူ ဘလော့ဂ်မှာ အခုလို ပုံစံမျိုးရေးတာ တော်တော် တွေ့ရခဲတာပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာ၊ ကျနော်ကတော့ ဒီနေရာလေးကို ပန်းခင်းလိုပဲ ခံစားရတာကို ပိုကြိုက်တယ်။ တခါတလေကျတော့လဲ ကျနော် ရေးခဲ့တဲ့ ဈေးတန်းလိုလဲ တူချင်တူသွားတာပေါ့...။ ဈေးတန်းဆိုတော့လဲ ပန်းစိုက်သူနဲ့ ပန်းအလှ ခံစားသူချည်းပဲတော့ ဘယ်ရှိနိုင်ပါ့မလဲလေ...။